Imibongo yothando nombhali Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ngoku ndiyazi ukuba yonke into endiyenzileyo ukuza kuthi ga ngoku ibinenjongo enye, ukudibana nawe kwaye uphile ubomi bonke, ngolonwabo.
Akukho mfuneko yokuba ngenye imini ndiyeke ukukuthanda kuba usisiphelo sam.
Yonke imihla ndivuka ndonwabile kwaye ndinemincili ukusukela ndinawe.
Andisoze ndidinwe kukubulela ngokuhlala ecaleni kwam.
Sele ndiyazi ukuba ndineziphene ezininzi kwaye ndiyaqhubeka nokwenza iimpazamo ngokuqhubekayo, kodwa ndiyazi ukuba enkosi kuwe ndinethuba lokuba yindoda engcono kwaye ndifunde ukwenza izinto kakuhle, ke, nceda, uqhubeke nam kwaye undifundise ukuba yindoda ekufaneleyo.
Oko ndakubona okokuqala ndandisazi ukuba ndiphulukene neqhayiya lam, kuba ngoku andikhathali nokuba kwenzekani okanye undenza ntoni, ndifuna nje ukuzinikela ukuze ndikonwabise.
Nokuba ndizokubandezeleka ngenxa yothando, kwaye nangona ungaze undithande isiqingatha sento endikuthandayo, andikhathali nganto, kuba ngoku eyona njongo yam kukusondela kuwe, nanjengomhlobo.
Yonke le minyaka ebephosakele ecinga ukuba uthando yinto eyenzekileyo kwaye ayibikho. Ngoku ndiyazi ukuba uthando lukhona kwaye linegama lalo.
1 Amabinzana othando kwiintombi
2 Imibongo yothando ngombhali
2.1 Intliziyo yesifuba (uMario Benedetti)
2.2 Ukupeyinta "Ukwanga" nguTheophile Alexander Steilen
2.3 Ukuba uyandithanda, ndithande ngokupheleleyo (Dulce María Loynaz)
2.4 Ndingabhala ezona vesi zibuhlungu ngokuhlwanje ... (uPablo Neruda)
2.5 Uthando lwanaphakade (Gustavo Adolfo Bécquer)
3 Iividiyo zemibongo yothando nombhali
Amabinzana othando kwiintombi
Ndiyakuthanda kuphela kude kube infinito nangaphaya.
Ungandibuzi ukuba kutheni ndisazi ukuba ndiyakuthanda, yinto engenakuchazwa ngamagama. Kanye xa usondela ndiyaqaphela indlela intliziyo yam ebaleka ngayo nendlela endifuna ukuba secaleni kwakho ngayo.
Ungumfazi onika umbala ebomini bam.
Ndikuthandile ngokupheleleyo, ndikuthanda njengokuba unjalo, ndifuna zonke iimpawu zakho nazo zonke iziphene zakho, andizukutshintsha kwanto ngawe.
Ndiyazi ukuba ndiyathandana kuba nje kuba ndikwazile ndinesizathu sokuvuka kusasa ndincumile kwaye ndinomnqweno.
Kumhla wokuzalwa kwethu olandelayo andizukukuthengela isipho esinexabiso eliphezulu okanye nabuphi na ubucwebe obucwebezelayo, ndikunika into exabisa ngaphezulu kakhulu, ndikunika uthando lwam ubomi bethu bonke.
Uye wabenza ubomi bam babanomdla kwaye kufanelekile ukuba ubufumane.
Nguwe wedwa iparadesi onomdla kum.
Wena nkosazana yam. Kungenxa yoko le nto ndingasokuze ndilishiye icala lakho kwaye nantoni na oyicelayo kum, ndiza kuyifumana.
Xa ndicinga ngekamva, ndibubona ubuso bakho kuphela.
Enkosi ngawo onke amaxesha amnandi esihlala kunye ukusukela oko sadibana, iyamangalisa indlela endiye ndakwazi ngayo ukuthandana kakhulu nomhlobo wam osenyongweni, ndiziva ndinethamsanqa.
Ubomi ngaphandle kwakho ecaleni kwam abubobomi.
Ndiyekile ukucinga ngam, ngoku andikhathali nokuba kwenzekani kum, ndicinga nje ukuba kubalulekile ukukubona uncuma.
Oko ndikubone okokuqala ndazi kakuhle ukuba ndiza kuphelela kuwe, ugqibelele.
Ngoku ndiyakwazi, ubomi bonke bubonakala ngathi lixesha elifutshane lokuba nawe.
Ndiyaphambana qho xa ndibona uncuma! Ndiyathemba ukuba yinto yokuqala endiyibonayo yonke imihla kusasa ubomi bam bonke.
Ukuba uyafuna, singabaleka kunye, wena kunye nam siye kude siye kwindawo apho kungekho nto ibalulekileyo, kuphela ulonwabo lwethu.
Inkangeleko yam ikuxelela yonke into imilebe yam ingakulinge ndikuxelele.
Undenze umntu ongcono, ngoku ndikhaliphile, ndiyazithemba kwaye ndiziva ndikwazi ukwenza yonke into, nokuba kubonakala ngathi kunzima kangakanani, kwaye ukwenzile konke oko wedwa, ngothando lwakho, ngothando lwakho nangomonde. Ndiyabulela kakhulu ngokuhlala ecaleni kwam imihla ngemihla, ndinethamsanqa ukuba nawe.
Intliziyo yesifuba (uMario Benedetti)
Ngenxa yokuba ndinayo kwaye andinayo
kuba ndicinga ngawe
kuba ubusuku bubanzi
ngoba ubusuku buyadlula kwaye ndithi uthando
kuba uze kuqokelela umfanekiso wakho
kwaye ungcono kunayo yonke imifanekiso yakho
kuba umhle ukusuka enyaweni uye emphefumlweni
kuba ulungile ngokusuka emphefumlweni kum
kuba ubufihla ubumnandi kwikratshi
kuba ndikujongile ndafa
kwaye mbi kunokufa
ukuba andijongi kuwe love
kuba uhlala ukhona naphi na
kodwa ukhona ngcono apho ndikuthanda khona
kuba umlomo wakho ligazi
Ndimele ndikuthande uthando
nangona eli nxeba libuhlungu njengamabini
Nokuba ndiyakukhangela ndingakufumani
ubusuku buhamba kwaye ndinawe
Ukupeyinta "Ukwanga" nguTheophile Alexander Steilen
Ndikuthanda ngentsimbi yeshumi kusasa (Jaime Sabines)
Ndiyakuthanda ngentsimbi yeshumi kusasa, nangentsimbi yeshumi elinanye,
kwaye ngentsimbi yeshumi elinambini. Ndikuthanda ngomphefumlo wam wonke kwaye
ngomzimba wam uphela, ngamanye amaxesha, ngeemvakwemini ezinemvula.
Kodwa ngentsimbi yesibini emva kwemini, okanye ngentsimbi yesithathu, xa mna
Ndicinga malunga nathi sobabini, kwaye ucinga malunga
ukutya okanye umsebenzi wemihla ngemihla, okanye ukuzonwabisa
ukuba awunayo, ndiqala ukukuthiya ngokungevayo, nge
isiqingatha sentiyo ndiyazigcinela.
Ke ndiyakuthanda kwakhona, xa siyokulala kwaye
Ndiva ngathi wenzelwe mna, ngandlela thile
idolo lakho nesisu sakho zindixelele ukuba izandla zam
ndiqinisekise ngayo, kwaye ayikho enye indawo
apho ndiza khona, apho ndiya khona, kungcono kunawe
Umzimba. Uze ngokupheleleyo ukundikhawulela, kwaye
siyanyamalala sobabini umzuzwana, singena
emlonyeni kaThixo, ndide ndikuxelele ukuba ndinayo
ndilambile okanye ndozela.
Yonke imihla ndiyakuthanda kwaye ndikuthiyile ngokungenathemba.
Kukwakho neentsuku, kukwakho neeyure, xa kungenjalo
Ndiyakwazi, kuba ungumphambukeli kum njengomfazi
wenye, I worry ngamadoda, I worry
Ndiphazanyiswa ziintsizi zam. Mhlawumbi awucingi
kuwe ixesha elide. Uyabona ngubani
ndingakuthanda ngaphantsi kunothando lwam?
Ukuba uyandithanda, ndithande ngokupheleleyo (Dulce María Loynaz)
Ukuba uyandithanda, ndithande uphelele
hayi ngemimandla yokukhanya okanye yesithunzi ...
Ukuba uyandithanda, ndithande mnyama
mhlophe, ngwevu, luhlaza, blonde,
kunye nebrunette ...
ndithande ebusuku ...
Kwaye kusasa ekuseni kwifestile evulekileyo! ...
Ukuba uyandithanda, musa ukundinqumla:
Ndithande nonke ... Okanye ungandithandi!
Ndingabhala ezona vesi zibuhlungu ngokuhlwanje ... (uPablo Neruda)
Ndingabhala ezona vesi zibuhlungu ngokuhlwanje.
Bhala, umzekelo: "Ubusuku bunenkwenkwezi,
kwaye iinkwenkwezi eziluhlaza ziyangcangcazela mgama. "
Umoya wasebusuku ujika esibhakabhakeni ucule.
Ndandimthanda, kwaye ngamanye amaxesha naye wayendithanda.
Ngobusuku obunje bendimbambe ezandleni zam.
Ndamphuza kaninzi phantsi kwezulu elingenasiphelo.
Wayendithanda, ngamanye amaxesha nam ndandimthanda.
Ungayithandi njani ngamehlo akhe amakhulu.
Ukucinga ukuba andinaye. Ndiva ngathi ndilahlekile.
Yiva ubusuku obukhulu, nangakumbi ngaphandle kwakhe.
Kwaye le ndinyana iwela emphefumlweni njengombethe engceni.
Ngaba kubalulekile ukuba uthando lwam alunakukugcina.
Ubusuku buzele ziinkwenkwezi kwaye akekho kunye nam.
Yiyo leyo. Mgama umntu uyacula. Mgama.
Umphefumlo wam awonelisekanga kukuphulukana nawo.
Njengokuba uza kumsondeza, amehlo am ayamfuna.
Intliziyo yam iyamkhangela, kwaye akakho.
Ngobo busuku mhlophe mithi minye.
Thina, abo ke, abafani.
Andisamthandi, yinyani, kodwa indlela endandimthanda ngayo.
Ilizwi lam lakhangela umoya ukuyichukumisa indlebe.
Komnye. Iya kuvela kwenye. Njengaphambi kokumanga kwam.
Ilizwi lakhe, umzimba oqaqambileyo. Amehlo akhe angenasiphelo.
Andisamthandi, yinyani, kodwa mhlawumbi ndiyamthanda.
Uthando lufutshane kakhulu, kwaye ukulibala kukude.
Ngoba ngobusuku obunje bendimbambe ezingalweni zam
Nangona le yintlungu yokugqibela endibangela yona,
kwaye ezi ziivesi zokugqibela endizibhalayo.
Uthando lwanaphakade (Gustavo Adolfo Bécquer)
Ngamana ilifu ilanga ngonaphakade;
Ulwandle luyoma ngephanyazo;
I-axis yoMhlaba ingaphulwa
Yonke into iza kwenzeka! UCanzibe ukufa
Ndigqume nge crepeal crepeal;
Kodwa ayinakuze icinywe kum
Idangatye lothando lwakho.
Iividiyo zemibongo yothando nombhali